Gareth Southgate ayaa diidan in uu u magacaabo kabtannimada Harry Kane. | Radio Himilo
Home / Xulka cayaaraha / Gareth Southgate ayaa diidan in uu u magacaabo kabtannimada Harry Kane.
Posted by: radio himilo in Xulka cayaaraha October 9, 2017	0 43 Views
Muqdisho – Harry Kane ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee gool-dhaliya mid kasta oo kamid ah afarta kulan ee ugu horreeya isaga oo ah kabtan England, hayeeshe wali macalinka hoggaamiya xulka qaranka saddexda libaax Gareth Southgate ayaan diyaar u aheyn in uu u magacaabo calaamadda xushmadda.
Weeraryahanka Tottenham, 27 daqiiqo penalty uu dhaliyay ayaa kaga filnaatay England in ay dhaafaan Lithuania oo ay 1-0 kaga adkaadeen waxaana u dheer in uu gool dhalinayey mid kasta oo kamid ah saddexii kulan ee ka horreysay oo uu isagu kabtanka ahaa waana Scotland, France iyo Slovenia.
“Waa Rikoor fantastic ah. Tayadiisa dhameystir waa mid sare,” ayuu yiri Gareth.
Xulka Qaranka England ayaa kamid ah waddamada usoo baxay dhacdada Russia ee 2018, Kabtankii xulkan ee Weyne Rooney ayaa horraan ku dhawaaqay in uu iskaga fariistay ciyaaraha heerka caalami, midkood Kahil-ka Chelsea ama Harry Kane-ka Tottenham ayaa noqon doona hoggaamiyaha xulka Saddexda Libaax.
Next: Wararka ugu waaweyn suuqa kala iibsiga maanta oo Isniin ah.